Harley Davidson na-eme igwe? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Harley davidson bicycle history - mkpebi ndị bara uru
Harley davidson bicycle history - mkpebi ndị bara uru
Harley Davidson na-eme igwe?
NaHarley-Davidsonụlọ ọrụ malitere na mmalite afọ 1900, mgbe William S. Enwere, agbanyeghị, afọ ise gbatịrị ebeHarley-Davidsonọ bụghị naanịimeọgba tum tum; ha mereigwe. Ugbu a, site na enyemaka nke Chicago HeritageBgba ígwè, ndị ụkwụ abụọ a echefuru echefu alọghachila.
igwe na-ewu ewu ugbu a onye ọ bụla na-achọ ụzọ dị mma na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ịgagharị na igwe elektrọnik na-ewu ewu nke ukwuu, ya mere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abụghị igwe kwụ otu ebe na-anwa ịbanye na omume ahụ wee soro harley davidson soro ụfọdụ nke ihe ndị na-adọrọ mmasị, nke na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ adọrọ Thelọ ọrụ ahụ, nke m chere na m hụgoro ogologo oge, doro anya nke ọma maka ọgba tum tum ya, mana ọ gbalịrị ịme aha maka ụgbọ ala eletrik. Ihe atụ kachasị ọhụrụ nke a bụ Serialone nke e-anyịnya igwe, aha nke Serial Otu bụ akara ntugharị nọmba, nke ahụ bụ aha aha Harley nwere maka mbido mbụ ya site na 1903. ụlọ ọrụ ahụ kwara anyị e-bike prototype nke bụ kwesịrị ịbụ reminiscent nke mbụ igwe kwụ otu ebe 120 afọ ndị gara aga, ma nke ahụ bụ nanị a na-ewu omumu thebikes na ụlọ ọrụ n'ezie tosellare ga-abụ ihe ndị ọzọ oge a na-achọ mbụ anọ ụdị si mmiri 2021 na anyị na Germany Bịanụ na ha na-pe Dal-Inyere igwe kwụ otu ebe na igwe batrị awara awara na imewe nke na-enweghị mgbagha Harley-Davidson, enwere igwe kwụ otu ebe iji mee ka ị bido.
Aha ndị ahụ bụ Mosh City Rush City, nke ikpeazụ dị na atọ dị iche iche dị ọnụ ala, mana maka ọnụahịa ahụ ị ga-enweta ọtụtụ. Onye ọ bụla na-abịa na moto nke nwere ike ịmepụta ma ọ dịkarịa ala 250 watts nke ike na-aga n'ihu, m na-ekwu ma ọ dịkarịa ala n'ihi na ọ ga-enweta karịa karịa mgbe ụfọdụ ma rute ọsọ ọsọ nke 20 mph bụ klas 3 e-bike, nke pụtara na ọ nwere ike iru ruo 28 kilomita kwa awa na Mosh City bụ ihe dị ọnụ ala dị ọnụ ala ọ bụ igwe kwụ otu obodo na-alụbeghị di na-enweghị ọtụtụ nke mma nke igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ Motors sitere na ụmụnne nke ụlọ ọrụ German dị afọ 110 na mgbe ha na-arụsi ọrụ ike anapụta 90 Newton mita na 60 ụkwụ-pound nke torque, nke bụ ihe karịrị iji na-echebe gị ọtụtụ ugwu ma ọ bụ na-efe efe ha ozugbo si bat, dị ka Bosch na ndị ọzọ na isi e-bike na-eweta, na Bros engines nwee ma mee ka anọ etoju Eco Tour Sport Anvialo akpaka gearbox N'ikpeazụ, nke a bụ igwe kwụ otu ebe na-adị ka ọ na-adị mgbe niile zuru oke, yabụ ugbu a, m na-agba ịnyịnya ihe dịka 25 mph nke bụ ezigbo ijeụkwụ, ịga nke ọma na-arị elu n'ezie mara mma, dị mfe ma ọzọ eke cadence nke na-ekwu na ọ dị m ka enwere m obere ọrụ m ga-arụ, yabụ na ọ bụghị ya niile na ọ dị mkpa iji ụkwụ m aka nke m nwere ekele. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime echiche m mbụ banyere igwe kwụ otu ebe Harley All of the wiring bụ esịtidem na-eme ka otu n'ime ndị kasị ọcha ebikes m hụrụ na a ogologo oge niile nke a wiring bụ esịtidem na etiti, ị na-adịghị enweta ihe ọ bụla nke na oke nke rat na-ele anya nke abuo nke ambialo automatic gearshift lever bu ihe na-eme ka odi ya abughi ihe, n'echiche nke m, i nwere ike ibanye na igwe ozo nke ndi ozo nke di na igwe a ma nwee ike igba igwe. enweghị nsogbu ọ bụla, olee mmetụta ọ na-adị, ọ dị ezigbo nro, n'ezie, ngbanwe akpaka na-agbanwe, ọ bụ ezie na ọ dị obere ịmalite, mgbe ọ na-abanye, ị na-eche na ike na-agagharị na moto a. ? Ọ na-adị n'ụzọ zuru okè, nke m na-agaghị ekwu na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe.
The etiti moto na-dị nnọọ n'ụzọ zuru okè positioned na na ala center nke igwe kwụ otu ebe ka i nwere a ala center nke ike ndọda na ọ dị nnọọ na-eche zuru okè, ọ bụ a jụụ igwe kwụ otu ebe na mere ka m obi jụụ na-agba ịnyịnya ọ pụrụ ịbụ a ọtụtụ E. -Bikes na mee m ka m dị ka onye na-efe ofufe mgbe m dere ya, ime ihe n'eziokwu, echeghị m na ọ dị m ka nke a bụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ nke m na-ede nke na-ekwu na ọ bụchaghị ihe ọtụtụ mmadụ ga-enwe na, ma enwere m mmetụta na a ga-enwe ebe ahịa doro anya maka igwe kwụ otu ebe a, ndị mmadụ ga-amata ihe ndị a nke ọma banyere igwe ndị a bụ na Harley-Davidson bụ ụlọ ọrụ ọgba tum tum ka i wee nwee ndị na-ere ahịa n'ofe mba ahụ. na gburugburu ụwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ijere otu igwe kwụ otu ebe a ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ya tupu ịzụrụ ya, ị nwere ike ime nke ahụ n Kedu ihe ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ e-igwe kwụ otu ebe a nwere ndị ahịa ugbu a nwere nhọrọ , Amam ihe ichoro 5,000 dollars bu otutu ego maka a igwe kwụ otu ebe bụ na nri price? Nke a bụ ajụjụ ị ga-aza onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na mpempe akwụkwọ data na akụkụ nke harley jiri mee ihe, o doro anya na ndị a bụ igwe arụpụtara nke ọma nke doro anya karịa ọnụ ahịa ndị ọzọ e-igwe kwụ otu ebe - panlọ ọrụ dịka Vanmoof na Rad Power, M na-ahụ ndị a dị ka ndị ọzọ asọmpi na ụfọdụ nke n'elu igwe kwụ otu ebe ụlọ ọrụ na ụwa na ị maara ihe a Harley baajị bụ ihe niile na nke ahụ bụ a anya daashi maka ụfọdụ ndị na nke ahụ bụ a nnukwu ihe ndị a bụ ndị mbụ anyịnya igwe na usoro otu , ma harley ekwuola na ha na-atụ anya ime ọtụtụ n'ime ha n'ọdịnihu ya mere e kwesịrị inwe ndị ọzọ lineups
Kedu mgbe Harley Davidson mere igwe kwụ otu ebe mbụ ha?
Yabụ ịchọrọ ịmara ma Harley Davidson Sportster bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe. Hey ụmụ okorobịa, nke a bụ DanDanTheFireman. Achọrọ m ịgwa unu banyere ya, enwekwara m ọtụtụ ihe kpatara m ji kwenye na ọ bụ.
Harley Sportster bụ igwe kwụ otu ebe mbụ m laghachiri na Nọvemba 2011. Ahụrụ m ya n'anya. Enweghịdị m nkwado nkwatumtum mgbe m zụtara ya ọhụụ site n'aka onye na-ere ahịa.
Ha ga-ebuba ya n'ụlọ m. Anọ m na-agbagharị gburugburu agbata obi ahụ n'abalị ahụ wee kuziere m ịkwọ ụgbọala. 25,000 kilomita mgbe e mesịrị m nwere ihe ole na ole m chọrọ ịgwa gị; ihe m chere tupu ịzụrụ na ụfọdụ ihe m chọpụtara n’ikpeazụ, ọbụlagodi na ị bụ otu n’ime ndị a Chọta ihe na-enye aka, pịa bọtịnụ Idenye aha. obere mgbịrịgba n'akụkụ ya.
Yabụ ị ga-amara gị ọkwa mgbe m biputere isiokwu Harley Sportster ọzọ. Ngwa ka anyi bido! Efu mbụ. Have ga-achọpụta ihe ị nwere ike imeli.
Nke a bụ Harley Davidson. Ọ gaghị adị ọnụ ala. New anyị na-eji.
Nke ahụ na - eme obere mgbanwe ebe a, mana ọbụghị ebe ị tụrụ anya ya. Ejiri Portsters ga-adị ọnụ ala, ee. Mana ebe ọ ga-abụ igwe kwụ otu ebe gị, ị gaghị echefu idobe ya.
Ee, ị ga-atụda igwe kwụ otu ebe gị, ihe ndị a siri ike. Yabụ ọ bụrụ na iji nke a, ị gaghị eche maka ịgbakwunye ihe ọzọ na tank. Nke a bụ ebe ịnya igwe USED pụtara.
A na-eleghara mmezi anya na ọgba tum tum. Karịsịa ụgwọ ndị na-ere ahịa Harley. Ọ na-achị ọchị.
Ọbụna mgbe ị na-agbanwe mmanụ. Nweta akwụkwọ ntuziaka, zụta ọkwa ọgba tum tum dị mma, ma mụta ihe! igbanwe mmanụ nke ya. N'ezie, ọ naghị esiri ike ma enwere ọtụtụ ederede YouTube n'ebe ahụ naanị na isiokwu ahụ.
Ekwesịrị m ịma na m mere mmadụ ole na ole, ị kwụrụ ụgwọ maka $ 100 jack ị ka zụtara. Kpamkpam njọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego, ịzụ igwe kwụ otu ebe nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka gị.
Nwere ike nweta ihe ịchọrọ, nke ahụ gụnyere teknụzụ ọhụụ. Dị ka ABS ma ọ bụ ihe ọhụrụ Roadster Sportster. Roadster ọhụrụ a na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ nke ọtụtụ ndị Sportsters enweghị.
Okpukpo ụkwụ agbanwee aha naanị otu. Bikgba ígwè ọhụrụ nwere ike ịnwe mkpali ndị na-ere ahịa ma nwee ike ịdị mfe ịkwado. Leekwa mkpuchi.
Echeghị m echiche banyere nke ahụ mgbe m banyere igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe na-adịkarị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere Sportsters. nke tarifu, ma shoparound. Mee ihe omume ụlọ akwụkwọ gị dị ka ịzụ ụgbọ ala ọhụrụ.
Nọmba 2, ịke na ịkwọ ụgbọala. You na-eme atụmatụ ịchụpụ ọtụtụ obodo? Ọ ga-amasị gị ịrị ugwu ụfọdụ? naanị ịkwagharị? Ndị a bụ ụfọdụ n’ime ajụjụ ndị ị kwesịrị ịjụ onwe gị mgbe ị na-arụ ụka. Mgbe m na-arụrịta ụka banyere Iron 883 ma ọ bụ Sportster 1200, a na m eche ihe m ga-eji gwongworo shitty na achọrọ m ọtụtụ n'ime Obodo ahụ.
Ihe m mere. Nke ukwuu. Akwọọrọ m Sportster m gafee California na Arizona.
Igwe 1200 rụrụ n'ụzọ dị ịtụnanya na ọsọ ọsọ. Echeghị m na 883 ga-eme nke a nke ọma n'okporo ụzọ awara awara n'ihi na echere m na m mere nhọrọ dị mma na ihe m chọrọ ps ma ọ dị m ka enwere m ihe m chọrọ n'obodo. Ihe di egwu banyere Sportsters bu eziokwu na inwere ike hazie ha otu ichoro.
Ọ bụrụ na-amasị gị na enwe hanga na n'ihu pegs Sportster. Kedu maka Cafe Sportster? Onye Sportster Scrambler? Onye Sportber Bobber? Enwere ike ime ihe ọ bụla na mgbanwe ole na ole. Site n'ụzọ, ee, ị nwere ike ịrị ugwu na Sportster.
Ekwela ka onye ọ bụla nye gị nsogbu ịgwa gị ihe ọzọ. Matt na emeela ya ọtụtụ oge. Otu ihe ị ga-atụle bụ ogo gị na ịdị arọ gị.
Ka anyi were kwuo na ibu nnukwu nwa nwoke. Banyere nha na ibu. O yikarịrị ka ị ga-achọ njikwa n'ihu na nkwusioru ka mma.
Ha nwere ogologo ụkwụ ma buru ibu. Mara kwa na inwere ike iyi nnukwu na Sportster ma e jiri ya tụnyere etu m dị. Adị m 5'6 `` ma nwee ike ịkọwa ngwaahịa Sportster chassis.
Site na nwelite m na-aga n'ihu 412 13.5 nke anụ ọhịa, ọ bụ oge oge ụkwụ. Yabụ ọ bụrụ na ị dị ogologo, mara na ngwaahịa Sportster nwere ike ịhapụ gị.
Ma! You nwere ike nweta nkwalite Sportster iji gboo mkpa gị. Aga m akwado Harley 48 ma ọ bụ Roadster maka gị. 48 na-abịa na njikwa n'ihu na okporo ụzọ na-abịa na nkwusioru ka mma.
Ugbu a nọmba 4. re na-eme atụmatụ ịzụ ya na mgbe e mesịrị. Ọ dịghị mkpa n'ezie ịme ihe.
Irongwè 883, Roadster, 1200 Custom, Harley 48 ma ọ bụ ụdị ọhụụ ọ bụla ịchọrọ iweta n’ahịa a. Ha niile na-adị mfe ịkwalite. Na Sportster engine siri ike ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbasa.
You ga-enwe ike dị mkpa ma ichere ya ga-adị mfe. Naanị ihe mere m ji chee na ịchọrọ ịzụ ahịa na Harley Sportster ga-emecha bụ ịgbanwe ụdịrị ịnya ịnyịnya gị. I nwere ike iche na ịkwọ ụgbọ ala gafere bụ ihe ịchọrọ ịme, yana okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ụzọ bụ ụzọ ị ga-aga.
Aga m agwa gị ozugbo, Sportster m nwere ntụsara ahụ ịga njem na steeti ma ọtụtụ mmadụ agbala ọsọ na Sportsters na-ahọrọ ịgafe mba, uru ahịa Harley Sportsters mara ezigbo mma. Naanị lelee ndị na-ere ahịa na craigslist. Ndị mmadụ na-ere wee zụta elu maka ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ dị mma.
Ok ụmụ okorobịa, ị na-na-ele m na ndabere na-akwọ m Harley Sportster. Ì chere na ahụghị m ya n'anya? egwuregwu m? Ahụrụ m ha n'anya! Echere m na ọ bụ nnukwu igwe kwụ otu ebe na m hụrụ egwuregwu egwuregwu m n'anya. Kilomita 25,000 mgbe e mesịrị ma ọ ka na-emeso m nke ọma, enweghị m ike iche igwe kwụ otu ebe ọzọ m ga-achọ ịnwe n'oge ahụ. ihe ncheta m nwere igwe kwụ otu ebe a na njem m ga-anọnyere m mgbe niile.
Echere m na ị masịrị gị niile. All na-anya ụgbọala n’udo ma dịkwa mma. Aga m ahụ gị ma emechaa.
Onye nwe Harley ugbu a?
kedu ihe agave
Youkwesighi ịbụ igwe kwụ otu ebe iji mara banyere Harley Davidson Harleys bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ma bụrụ onye America ruo mgbe ị rụrụ ọrụ na Harley-Davidson na 2006. saleslọ ahịa US ụlọ ọrụ ahụ rutere, na-ere ihe karịrị 260,000 igwe kwụ otu ebe na United States, na-akọ akụkọ $ Ijeri 1 na uru, mana mgbe nlaazu 2007, ahịa Harley dara, na-adọkpụrụ ọnụahịa ya na ya, ụlọ ọrụ ahụ enwetabeghịkwa kpamkpam ruo ọtụtụ iri afọ, na anyị niile ka ga-abụ Harley Associate Davidson nwere ọgba tum tum kachasị. akara n'ụwa, mana enweghị igwe kwụ otu ebe ị nweghị ike ịzụta. Ihe mere Harley Davidson malitere site na ntụ na Wisconsin na 1903, ebe William Harleyand Arthur Davidson wuru ọgba tum tum mbụ ha, mana ụlọ ọrụ ahụ amaliteghị ruo WWII ma na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị na Harley Davidson dị taa n'oge WWII ikekwe ọzọ Harley Davidson rụpụtara ọgba tum tum 60,000 maka ndị agha US.
N'oge ahụ e nwere n'ezie ndị mmadụ na-ahụtụbeghị igwe ọ bụla dị egwu nke nwere ike ịkọwa na m pụtara na ọ bụ igwe agha, mana ọ dịkwa mma ọ funụ mgbe ọ nwụsịrị arụrụala nke ndị agha agha laghachiri n'ụlọ wee hụ America n'ụzọ dị iche na site na nke ha kere a counterculture nke ga-aghọ ụlọ nke Harley-Davidson si ebi ndụ America bụ ebe na-agbanwe agbanwe n'oge ahụ na ọtụtụ ndị si ebe ahụ lọta wee sị, ah, enweghị m mmasị, aga m enweta onwe m a ọgba tum tum Harley-Davidson wee kụọ ndụ n'okporo ámá m ga-ebi ndụ m na usoro m na nnwere onwe Mbugharị ntọala n'etiti 1945 na 1970 ọnụ ọgụgụ nke ọgba tum tum ndị edenyere aha na US si na otu narị na iri iteghete na asatọ na nde 2.8, mana ọ bụ Hollywood na Harley-Davidson ọgba tum tum nwere ihe nkiri dị ka The Wild and Easy Rider na Harleys nke pụtara na igwe mmadụ ahụ -Davidson anaghị ere Ọ bụghị naanị ọgba tum tum, kama ọ bụ ụdị ndụ nke jaketị, akwa, na t-shirts. Harley-Davidson nwere klọb nke ha akpọrọ Harley Owners Group maka ndị ahịa ji obi ha niile na-efe ya, na nkenke, ọ bụrụ na ị nwere Harley Davidson ị dị jụụ ma ụmụaka boomers chọpụtara na Core Baby Boomers Ha 'Ndị ahụ Mere Harley bụ Juggernaut ọ ghọrọ na oge agha-agha ruo mgbe 80s, nwa ọhụrụ boomers toro ma ya mere Harley Davidson toro Harley OwnersGroup ihe karịrị ndị otu 90,000 na 1984 na Companylọ ọrụ ahụ nwetara uru nke $ 2.9 naanị afọ abụọ ka e mesịrị.
Uru ruru nde $ 4.3. Harley Davidson gara n'ihu ọha na 1986 wee gaa n'ihu na-enweta ego site na puku afọ iri na 2006, mgbe onye ahịa ya ruru afọ ndụ, ọnụahịa ụlọ ọrụ ahụ ruru elu, na-ezite uru nke ihe karịrị $ 1 ​​ijeri, mana kụrụ na 2007 nlaazu ole ụlọ ọrụ ole lụrụ ọgụ n'oge ndalata azụ ahịa Harley dara akara akara afọ 13 tupu nsogbu ahụ Harley gbalịrị iru ahịa ndị na-abata dịka ụmụ nwanyị na ndị na-eto eto nwere mmemme azụmaahịa maka igwe kwụ otu ebe na obere, ndị na-ere mmanụ nke ọma, agbanyeghị ọ zutere na obere ihe ịga nke ọma, na na mbubreyo 2009 ụlọ ọrụ gwa a $ 55 nde ọnwụ na-adị ndụ nlaazu, nke lekwasịrị anya na ụlọ ọrụ na ụdị nke igwe kwụ otu ebe ọ maara na ya isi ahịa chọrọ nnukwu oké ụzụ ụdị, na ọ na-arụ ọrụ, na uru rịgooro na 2014 ka narị asatọ na iri anọ na anọ, ma ọ bụghị ya niile ka ọ dị ka ọ dị ka ọ dị ka uru ndị a na-ekpuchi nsogbu nke ogologo oge, ma ọ bụrụ na ị na-ele ya ata eserese, ihe ị ga-ahụ abụghị gị mara ụdị nsogbu mbụ a bụ na onye isi ahịa Harley nọ na 1985 afọ.
Ogologo afọ nke ndị nwe ọgba tum tum bụ 27, site na 41 na 2003 na 50 na 2018, nke pụtara na ndị ahịa Harley Davidson na-aka nká ma ọ dịghị onye na-ewere ọnọdụ ha ugbu a. Ihe nke abuo bu ugwo Harleys di oke onu, dika New York Times si kwuo, onu ahia Harley bu ihe dika $ 20,000. Enweghi ugbo ala bara uru iji na-ebughari ma na-abanye n'ime ihe eji egwuri egwu di oke onu, nke na-eduga na nsogbu nke ato na nke ikpeazu nke Harley Davidson bu ihe ndi mmadu na-adighi adighi nma dika otutu umuaka, na umuaka umuaka ndi n'eme ka ika ahu na-eto eto. ụlọ ọrụ nwere aha ahụ na Harleys bụ naanị maka ndị ọcha toro eto na-ekpochi ụlọ ọrụ n'etiti iguzosi ike n'ihe na ọganihu n'ọdịnihu, mana Harley Davidson 'agaghị agbada na-enweghị ọgụ' onye na-elekọta ya doziri nsogbu ndị ahụ.
Asharley CEO Matt Leba Touch bụ ọrụ kachasị sie ike n'ụwa. Ọ nwere nhọrọ ịhọrọ ịnọdụ ala ma merie oke mbuze a, mana o kpebiela na ya ga-eji ohere a. Echere m na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbalị iji hụ ọdịnihu dị mma maka mmemme nke Harley nwere na ọgba tum tum ntinye ha nke a na-akpọ Sportster ebe ị nwere ike ịzụta Sportster ọhụrụ wee zụọ ya n'ime otu afọ na dollar ọ bụla ị na-emefu na ịzụta ihe igwe kwụ otu ebe maka nweta nkwalite, nweta.
Ọ bụ ụzọ dị mma iji mee ka ụkwụ gị dị mmiri wee kwalite ihe ka mma maka gị mgbe ịchọtara n'okpuru Levitt - ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya iru ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ karịa ndị ọchụnta ego na Harley- Davidson tụgharịrị ịrịọ onye nnọchi anya ka o ziga nkwupụta mgbasa ozi na atụmatụ ụlọ ọrụ ugbu a, na-elekwasị anya n'ịgbasawanye ahịa ụwa na iwebata ngwaahịa ọhụrụ, dị ka igwe eletriki igwe eletriki na obere ụdị, mana maka ugbu a enwere ihe mgbochi ọzọ na ụzọ Harley, anyị ga-enwe 25% anụ ọhịa na nchara ndị ọzọ na 10 -inch ma ọ bụ aluminom mba ọzọ ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ karịrị ókè anyị, nke pụtara na ịme ọgba tum tum na America ugbu a dị oke ọnụ, na nzaghachi nke European Union na-etinye ụtụ isi nkwụghachi ụgwọ na ngwaahịa US, gụnyere bourbon ọgba tum tum, dị ka The York Times gaara eme ọgba tum tum banyere $ 2,200 dị oke ọnụ na Europe iji zere ọnụahịa nke Harley nọgidere na-aga mba ndị ọzọ, nke Trump na ụfọdụ ndị ahịa Harley na-ejighị ụjọ te ndị a mara mma ọgba tum tum na US. Don't naghị arụ igwe anyịnya igwe na US ma tinye ha n'ụgbọ mmiri wee zipụ ha ebe ịchọrọ ire ha make na-eme ha na ebe ire ere ka e wee nwee ike iji ihe ndị a niile zụọ ahịa nke ọma. na-etolite azụmaahịa ya mgbe ọ na-echekwa akara ya araparawo, mana ha nwere nsogbu na-enweghị mmasị, nke bụ na agbanyeghị na ha rapaara, ha ka nwere ike ịme nnukwu ego na akụ ngwaahịa. Ha maara na ha ka na-achịkwa oke pasent nke ahịa ma nwee ike iji njikwa ahịa ahụ na ngwaahịa ha na-ere na ya iji nweta uru dị oke mkpa ma soro ndị na-etinye ego gị kerịta uru ndị ahụ na Harley-Davidson nwere ike nweta uru ndị ahụ wee jiri ya tinye aka na ya azụmahịa ahụ ma nwaa ihe ọhụrụ.
Harley's brand equity bụ ihe bara uru, ọ dị ịtụnanya, ma onye maara ma nke ahụ ezuru?
Ogologo oge ole ka Harley Motors na-ewe?
Maka igwe kwụ otu ebe, kilomita 25,000 nwere ike ịbụ ọtụtụ.Harley-Davidson ọgba tum tum na-wuru kaadịru ogologo oge. Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe nwere ndekọ mmezi dị mma, enweghị ihe ịrịba ama nke mmebi na enweghị mmanụ mmanụ, ọbụlagodi igwe kwụ otu ebe nwere 40,000 ruo 50,000 kilomita nwere ike ịtụ anyaikpeazụkaogologooge.10 jul. Dec 2019
Onye ọ bụla mepere ebe a. Daalụ maka ịgbanye. Achọrọ m ngwa ngwa na eriri eriri Harley-Davidson na-eme ụgbọala ikpeazụ maka Harley-Davidson OK, yabụ ana m ajụ ọtụtụ oge oge eriri eriri Harley ga-adịru? Oge mmezi dị na akwụkwọ ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ anaghị adaba na ha anaghị enye gị nkọwa ọ bụla gbasara ogologo oge eriri ga-adịgide.
Nke ahụ bụ ajụjụ dị arọ, n'ezie. O ruo ihe dị ka ogologo eriri ogologo oge? Ihe m chotara na eriri Harley Drive bụ na ha nwere ike ịga nke ọma karịa 200,000 kilomita na kilomita 160,000 gbakwunyere n'enweghị nsogbu, ihe na-ebibi mgbe niile ga-abụ nkume etinye n'etiti belt na pole wee wepụ eriri ahụ, mana m huru ihe di egwu nke n’agabiga. Ahụrụ m na ịghasa abanye n'ime ya ma ọ bụrụ na m wepụ ya eriri ahụ ka ga-achọpụta na nwa okorobịa ahụ enweghị ike dochie ya. Onye nwe ya kwuru na ọ dị ntakịrị ihe ike na igwe kwụ otu ebe.
Ọ na-enwe mmasị ịkwọ ụgbọala nke ukwuu. Nke a abụworị eriri nnọchi. Anyị ga-etinye onye ọzọ ebe nke a ka agbatị A ndetu ngwa ngwa ga-abụ na akwụkwọ ntuziaka ọrụ na ọ na-enyocha, dochie ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eme mgbanwe mmezi na-edebe ya nke ọma na-eme ka nsogbu ahụ dị nke mere ka nsogbu ahụ , Gbalia ihu n’inwe onu ogugu a ga-ebute nsogbu ndi ozo.
N'okwu a, m ga-egosi gị ụfọdụ mmechi dị ka ezigbo igbe gearbox apụla ọzọ. Anyị na-eche na ọ bụ n'ihi na eriri ahụ siri ike, ma ugbu a, anyị ga-eji dochie nnukwu gearbox na-ebu kwa, nke dị ntakịrị ihe ịtụnanya mgbe anyị rutere ebe a bịarutere. Anyị anaghị atụ anya nke a ya mere enwere m edemede banyere otu esi edochi eriri ụgbọala na ụdị Touring nwere LooseArm na ntụgharị, nke bụ ihe a na-ahụkarị maka ịchọ ozugbo ị mechiri mkpọchi ebe a, mana n'ezie nnofega ogwe aka ebe a bụ rụrụ na splines.
specialized fuuz comp
M ga-eji ihe dị elu na-adịghị elu dochie ihe a. Agaghị m ahụ ha n'ụzọ ebe ahụ ka m nwee ike ịkwado ha. That na-eme nke a mgbe ị nọ ebe a? Ga - echekwa nsogbu ụfọdụ ma emechaa n'ihi na mgbe ị na - adọta ma ọ bụ mebie ihe ahụ, ị ​​gaghị enwe ike ime ihe ahụ.
Ga-ewepụ ya. A ga-enwe obere ọkwa na ezigbo eri nke nnukwu efere ahụ. Ọ dị mma, m kwurula ọtụtụ oge banyere iwepu nkedo ahụ ma ọ bụrụ na ogwe aka ahụ tọgbọrọ ka ị nwere ike ịnwe nsogbu na ịghasa n'onwe ya.
Nke a na-egosi ntụpọ ewepụghị na eri. Yabụ mgbe iwepụsịrị etiti dị n'etiti, wepu ma dochie ya. Enwere m nnọchi nchara nchara a.
Aga m etinye ụfọdụ nke C mgbe ọ bụla ma dochie nkedo na-agba agba nke dị n'ebe ahụ. Naanị ihe edeturu ngwa ngwa gbasara Harley-Davidson Drive Belts, enweghị ezigbo anwansi dị anọ maka kilomita. Ahụla m ha nke ọma ihe karịrị otu narị puku kilomita na iri isii, na ihe na-ebibi ha na-emechiwanye ma ọ bụ ụdị irighiri ihe na-agabiga eriri na paịlị nke ga-ebibi pole.
Anọ m na-ama jijiji, dịka a ga - asị na eriri kevlar aramid, ihe ọ bụla ha na - eji, nwere ike ijikọ ya ọnụ. Ihe na-elezi anya na Jeff, Crackerjack Mechanic. Daalụ maka ịgbanye.
Ọ bụrụ na isiokwu a na-amasị gị, pịa bọtịnụ Idenye aha na aka nri. Daalụ maka ile anya
Kedu nke kacha agba ọsọ Harley Davidson?
Afọ iri abụọ ka nke ahụ gasịrị, Dave Campos, onye na-agba ịnyịnya ígwè kụrisiri yaọgba tum tumala ọsọ ndekọ na a wuru 7 mita-ogologoigwe kwụ otu ebeakpọrọ Easyriders Streamliner. Ejiri igwe 1500cc kwadoro igwe ọrụ ọhịa aHarley-Davidsonengines ma rute na mmiri na-agba 519.609 km / h (322.870 mph). Ihe ndekọ a dị afọ 16.Ọkt 2 2020
Gịnị bụ ihe ndị kasị ochie ọgba tum tum ika?
Tọrọ ntọala na 1893, Royal Enfield bụochie ọgba tum tumụlọ ọrụ na mbara ala. Emepụtara ebe 1932, otu cylinder Royal Enfield Bullet bụ ihe kachasị ogologo na-agba ọsọ naọgba tum tumakụkọ ihe mere eme.Ọgọst 29 2017
Kawasaki zụrụ Harley Davidson?
Onwuchekwa Davidsonenwetara site na JapanKawasakiMotor Company LTD. Milwaukee, Eprel 1, 2014 -Harley-Davidson, Inc. (HOG) ekwuputala nkwekọrịta iji nweta nke JapanKawasakiMotor Company LTD taa, Tuesday, April 1, 2014 maka ego a na-akọwaghị.Mar 31 2014
Ndi Kawasaki nwere Harley Davidson n'ezie?
Onwuchekwa Davidsonenwetara site na Japanesenwere KawasakiMotor Company LTD. Milwaukee, Eprel 1, 2014 -Harley-Davidson, Inc. (HOG) ekwuputala nkwekọrịta nke ndị Japan ga-enwetanwere KawasakiMotor Company LTD taa, Tuesday, April 1, 2014 maka ego a na-akọwaghị.Mar 31 2014
Ndi BMW nwere Harley Davidson?
(MUNICH, GERMANY) Norbert Reithofer, onye isi oche nke Bayerische Motoren Werke AG, kwuputara taa naHarley-DavidsonMotor Company anabatawo a enyi mmakọ nkwekọrịta site naBMWga-ejikọkwa ụlọ ọrụ ọgba tum tum ha. MaazịEprel 1 2011
Gịnị mere Harleys ji bụrụ onye a na-apụghị ịtụkwasị obi?
Naenweghị ntụkwasị obiMkpado na-abịa site na ụbọchị AMF. Na 80s AMF zụtara HD ma ha karịrị isi ha ma wepụta ụfọdụ ngwaahịa ndị na-adịghị mma. Ha mepụtara ụfọdụ, ma na-agbaga ngwaahịa na ahịa naNke Harleyemere n'oge ahụ na-achọ ịkụda ọtụtụ.
Kedu mgbe Harley Davidson malitere ịme igwe kwụ otu ebe?
Harley-Davidson bụ akara ngosi ọgba tum tum, nke doro anya, mana obere oge na mmalite narị afọ nke 20 ụlọ ọrụ Milwaukee na-egwuri egwu dị ka onye na-eme igwe. Na mgbalị ịmebata ndị na-eto eto (na ndị nwere ike ịnya ụgbọ ịnyịnya) na ika ahụ, ọ rere ịnyịnya ígwè mara mma n'etiti 1917 na 1922.
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe na-ere Harley Davidson
Harley-Davidson Na-ere Bgbọala. Harley-Davidson bụ akara ngosi ọgba tum tum, nke doro anya, mana obere oge na mmalite narị afọ nke 20 ụlọ ọrụ Milwaukee na-egwuri egwu dị ka onye na-eme igwe.
Kedu mgbe Harley Davidson ghọrọ onye nrụpụta ọgba tum tum kachasị?
Ka ọ na-erule oge 1917 bịara, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmepụta Harley Davidson niile gara ndị agha US na otu afọ ahụ ire ere Harley-Davidson. Mgbe ọ fọrọ nke nta afọ 20 nke ịdị adị, Harley Davidson ghọrọ onye nrụpụta ọgba tum tum kachasị na ụwa dịka a pụrụ ịzụta ụdị ha na mba 67 n'ụwa niile site na 1920.